Hametra-pialàna Sa Tsia: Roa Mpanao Lalàna Mametraka ny Raharahan’Ireo Amin’ny Fifidianana “Fitsipaham-pitokisana” Natao Tamin’ny Lehiben’ny Fitsarana Any Trinidad Sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2017 11:59 GMT
Ny Efitrano Lehiben'ny Fitsarana ao Seranantsambon'i Espaina, Trinidad. Sary nalain'i Klaas Vermaas, CC BY-ND 2.0.
Mitohy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto momba ny fifidianana fitsipaham-pitokisana ataon'ny Fikambanan'ny Mpanao lalàna any Trinidad sy Tobago (LATT) amin'ny Lehiben'ny Fitsarana, Ivor Archie. Voamarina ve sa fanatavezan-dresaka bebe kokoa no azo ilazana ny fitakiana ny fametraham-pialan’i Archie? Mety ho fanampiana sa ho sakana amin'ny fampandraisana andraikitra io fametraham-pialany io? Miankina amin'izay olona anontaninareo.
Iray amin'ireo feo nivantana momba ny fanoherana ao ambadik'ilay fifidianana ilay Mpanolontsaina Zokiolona, Martin Daly – amin'ny fanongontsongoana ny tsy fahombiazan'ny fanendrena an'i Maria Ayres-Caesar tao amin'ny Fitsarana avo. Ayres-Caesar izay filohan'ny fitsarana teo aloha, dia namela antontan-taratasy fiampangana manandanja mbola tsy voatsarany ho an'ny aty aoriana, izay nanimba ny mety ho fahafahan’ireo maro voafonja mba hahazo ny rariny ara-potoana.
Tao aminà lahatsoratra tamin'ny faran'ny herinandro tao amin'ny tranonkalam-baovao Wired868, nambaran'i Daly ny antony mahatonga an'i Archie sy ireo mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny Fitsarana sy Mpanao Lalàna (JLSC) — izay manoro hevitra ny filoha amin'ny fanendrena ireo mpitsara — ho tokony hametra-pialana noho ilay toe-draharaha. Namerimberina niantso ilay fifidianana fitsipaham-pitokisana ho “fotoana tena tsara amin'ny fampandraisana andraikitra ireo mpiasam-panjakana” i Daly. Nanazava izy hoe:
Misy singa roa tena ilaina amin'ny fampiasana ny fahefana. Ny iray dia ny manampahefana ara-dalàna hampihatra ny fahefana. Ny iray hafa dia fahefana ara-moraly izay fototr'io fampiasana ilay fahefana io ary mifototra amin'ny fitokian'ny olom-pirenena […]
Rehefa ireo zavatra nataony sy ny fanadinoany no voalohany natao fanadihadiana ara-dalàna, tena niavonavona tanteraka ny JLSC, […] Ny marimarina kokoa, tsy niaiky ny fananany anjara andraikitra tamin'ny fihemoran’ny ampahany 53 amin'ireo tranga heno ho tokony ho efa natomboka[..]
Izay toetsaina diso sady mahery izay no nanimba ny fitokian’ny vahoaka ny JLSC ary niafara tamin'ny andalan-teny mafonja momba ny fitsipaham-pitokisana ary ny antso ho amin'ny fametraham-pialàna. Araka izany, namoy ny fahefany ara-moraly ny Filohan’ny Fitsarana sy ireo mpikambana hafa ao anatin’ny JLSC ary koa namoy ny maha-ara-drariny ny fampiharan'izy ireo ny fahefàna araka ny lalàm-panorenana nankinina tamin'izy ireo.
Justin Phelps, mpisolovava — izay nanao an-kivy ny fifidianana fitsipaham-pitokisana satria, ny filohan'ny fitsarana aza tsy anisan'ny mpikambana ao amin'ny fikambanan'ireo mpahay lalàna akory, tsy anjara raharaha araka ny lalàna ho an'ny LATT io — dia nantso ny lahatsoratr'i Daly ” ho tohankevitra tsara indrindra HO AN'NY fametraham-pialàn'ny CJ [Filohan'ny fitsarana] izay ho hitanao ao anatin'ny ankamaroan'ireo antso toy izany”. Na izany aza, mbola nino izy fa “tena manify ny fototr'ity antso ho an'ny fametraham-pialana ity – na teo aza ny fanatavezana azy”:
Inona no mody lazainy momba azy ary mahitsy ve izy ao anatin'ireo fanapahankeviny? Ny filazana hitako eto dia ny tsy fahombiazan'ny fanarahamaso tena izy ny lasan'i Caesar-Ayers ary ny tsy fisian'ny fanetrentena amin'ny famaliana ireo fanontaniana mila valiny. Nahitsin'ny JLSC ilay voalohany tamin'ny alalan'ny fandàvana ny fotoana nifanomezana, sy ny famoahana fanambaràna iray manazava ny antony. Nisy ihany koa ny fanambaràna avy amin'i Ayers-Caesar izay nanaiky ny andraikitra ary tsy mbola nolaviny ampahibemaso. Tsy antony tokony hanesorana ny lehiben'ny fitsarana (CJ) iray amin'ny toerany ilay fanambaràna faharoa amin’ny tsy fahampian’ny fanetrentena ao anatin’ny valinteny, na ny tohankevitra noho ny tsy fisian'ny mangarahara na ny tsy fandraisany andraikitra. Mety ho antony tsy hitiavana azy izany, saingy tsy maharesy lahatra.
Izay tsy ampy amin'ny fifampiresahana dia izay tsy afaka toherina: misy hevitra taloha ary antony tena tsara hiarovana ny biraon'ny Filohan'ny Fitsarana amin'ny fampitahorana sy ny resaka politika. Tokony harovana ny fotoam-piasany mba hahafahany mitazona ilay fikambanana izay miasa ho toy ny mpanaramaso farany amin'ny fampiasana ny fahefana mpanatanteraka. Tsy misy milaza izany ary mampalahelo izany – satria mety hanampy ny vahoaka amin'ny fandrefesana ny haben'izay lazaina ho fandikandalàna ataon'ny CJ. Ho solony, ampiasaina ireo teny manaitra toy ny fandraisana andraikitra sy ny mangarahara mba hanamarinana ny firodanan'ny governemanta izay miantoka fa mangarahara sy mandray andraikitra ny mpanatanteraka.
Namaly i Phelps momba ny resaka mahakasika ny ara-drariny:
Tsy diso ny milaza fa very ny maha “ara-drariny” ny CJ (JLSC). Tsy nanary ny ‘fahefana moraly’ mba hanatanterahany ny asany ny CJ noho izay fifidianana tsy vao governemanta iray no very ny fahefana moraly na ny ara-drariny amin'ny hetra satria manasonia fanangonan-tsonia ho an'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ny ampahany amin'ny firenena. Raha miovaova toy izany ny andrim-panjakantsika, tsy ho afaka hifehy ny lalàna sy ny filaminana isika.
Na izany aza, nanohana ny lahatsoratr'i Daly fa “ny tsy fahampian'ny fahazotoana sy ny fandraisana andraikitra dia tena zavatra samy hafa ary tsy tokony hafangaro — toy ny saika nataon'ny sasany — tamin'ny fampiatoana noho ny fitondrantena tsy mendrika teo anatrehan'ny Lalàm-panorenana”:
Ny fahaverezan'ny fahatokisana sy ny maha ara-drariny ny JLSC no miantoka, raha toa izy ireo ka mifikitra amin'ny toerany, fa ny fotoana nifanomezana izay lazain'izy ireo fa hataony amin'ny hoavy dia ho eo ambanin'ny rahona ary tena ho voatohintohina mafy tokoa ny maha ara-dalàna ireo olona ho voatendry […]
Ny fiantraikany iray hafa amin’ity resaka ity dia resaka mampalahelo nataon'ny olona teny an-dàlambe, raha toa ka isika no hany farany afaka hiambina ny raharaham-pitsarantsika.
Hitan'i Phelps ho tena feno fanesoana izany:
Diso ny asan'ny mpanao lalàna raha toa ny fifidianany ka eritreretiny hoe maneho ny ‘hevitry ny vahoaka’ tena malalaka mba hanaisorana ny fahefana na ny maha ara-dalàna ny andrim-panjakana demokratika iray. Tena zava-dehibe ny hevitry ny vahoaka – nefa eto, izay hevitra izay dia maka endrika, TSY notefen'ny fitondratenan’ny CJ Lehiben’ny Fitsarana, fa noho ny antso tsy misy farany sy nipariaka be tamin'ny haino aman-jery nataon'olom-bitsy ho azy mba hialàny. Ny mahatsikaiky – FORONIN'ireo mpanakiana azy ny tsy fahampiam-pitokisana lazain'izy ireo ho antony tokony hialàn’ny lehiben’ny mpitsara.
Ny fandehanany dia zavatra hafa mihintsy, ary toa zavatra mety tsy hiseho. Raharaha tena manahirana ny manaisotra lehiben’ny mpitsara amin’ny toerany. Ny dingan'ny fanaisorana dia tokony hahitana fanadihadiana mahaleo tena. Manambara ny lalàm-panorenana fa hany azo anesorana amin’ny asany ny lehiben’ny fitsarana dia “noho ny tsy fahafahany manao ny andraikiny eo amin’ny toerany […] na amin’ny fitondrnttena tsy mendrika”, izay toa tsy misy azo ampiharina amin’ity raharaha ity.
Toy izao ny nanazavàn'i Phelps azy:
Misy antony matoa ny Andininy 137 [amin'ny fanesorana amin'ny asany ny mpitsara iray] mamaritra ny haavon'ny lentan'ny fanaisorana lehiben'ny mpitsara ary noho io antony io indrindra no ahazoan'ny fahefana mpanao lalàna ambaratonganà fiarovana ambony mba hampandeha ny demokrasia. Io teboka io no banga ao amin'ilay lahadinika. Raha misy fahamendrehana amin'ity fomba fijery ity dia angamba manana andraikitra TSY HAMETRA-PIALANA i Archie mba hiarovana ny maha-ara-dalàna sy ara-moraly ny fahefan'ny rafi-pitsarantsika.